La wadaag xigmadaada si aad nooga caawiso hormarinta barnaamijkena cusub
Cusboonaysiinta: foomka su'aalaha wuxuu xirmay Nofeembar 27, 2019.
Deyrtan, McKnight wuxuu ku dhawaaqay barnaamij cusub oo raadinaya inuu horay u socdo a caddaalad iyo sinnaan badan oo Minnesota ah. Hadafka: U dhis mustaqbal firfircoon dhammaan reer Minnesota leh awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal. Waxaan ku heshiinney in hormarinta sinaanta midab ahaanta ay tahay udub dhexaad, aan ahayn mid sare, dhisida Minnesota oo u shaqeysa qof walba. Waxaan dooranay saddex qaybood oo ahmiyada la saarayo: dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, horumar sinnaan ah, iyo hawlgelinta bulshada.
Waxaad ka heli kartaa waxbadan oo kusaabsan safarka barashada iyo howsha aan qabanay sanadkii lasoo dhaafay adoo booqdayaga bogga, oo bartaan sida loogu martiqaado fikirka bulshada.
Waxaan hadda fiirineynaa xigmadda xubnaheenna, shuraakadayada, iyo kuwa kale ee ku nool gobolka Minnesota oo dhan. Waxaan ku dari doonnaa fikradaha ka soo baxaya howshan maadaama aan u horumarinay xeelado barnaamijkeena cusub ee Minnesota. Waxaan sidoo kale la wadaagi doonnaa wixii aan ka barannay jaaliyadaha ka soo qeybgalay, anagoo rajeynayna in waxyaabaha ka mid ah ay waxtar u yeelan karaan kuwa kale sidoo kale.
Fadlan hoos guji si aad uga caawiso ogeysiinta wadahadalkeena iyo go'aannada istiraatiijiyadeed. Tani waa xog-waraysi qoto dheer oo leh lix su'aalood. Waxa intaa u dheer qaar ka mid ah su'aalaha tirakoobka ee aasaasiga ah ee naga caawinaya fahamka qofka aad tahay, waxaan ugu horrayn weydiinaynaa xeeladaha aad ku talinayso McKnight xoogga saareyso kheyraadkeeda si loo hormariyo sedexda aag ee diirada lagu saarayo. Sidoo kale, isweydaarsiyo intee leeg ayaad ku aragtaa dhammaan barnaamijyada barnaamijka 'McKnight' (Fanka, Cimilada Midwest & Tamarta, iyo Bulsho loo wada siman yahay) ee Minnesota? Fadlan ogsoonow in natiijooyinka dib loogu eegi doono si taxaddar leh. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid sahanka, fadlan la xiriir Neeraj Mehta. Xilliga kama dambeysta ah ee la buuxinayo foomka su'aalaha Arbaco, November 27.